Midowga Yurub: Xeerarka gelitaanka Hong Kong ee cusubi waxay halis ku yihiin maqaamkeeda caalamiga ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hong Kong » Midowga Yurub: Xeerarka gelitaanka Hong Kong ee cusubi waxay halis ku yihiin maqaamkeeda caalamiga ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Hong Kong • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Nidaam cusub oo karantiil ayaa ka dhigi kara qaar badan oo ka mid ah ganacsatada caalamiga ah su’aal ah inay rabaan inay ku xirnaadaan Hong Kong.
Hong Kong waxay adkeyneysaa shuruudaha gelitaanka ee socotada shisheeye.
Yareynta waqtiga karantiil ee khasabka ah mar dambe suuragal ma aha.
Hong Kong waxay aqoonsan tahay tallaalka Sputnik V ee Ruushku sameeyay.
Frederic Gollob, oo ah Madaxweynaha Rugta Ganacsiga ee Yurub (ECC), ayaa sheegay in xeerar cusub oo adag oo gelitaanka Hong Kong ay wiiqi karaan maqaamka magaalada ee ah xarun ganacsi iyo mid maaliyadeed oo caalami ah.
"Waxaan aaminsanahay in magaaladu hore u furto, haddii kale nidaamkan cusub ee karantiilku wuxuu ka dhigi karaa qaar badan oo ka mid ah bulshada caalamka su'aal ah inay rabaan inay ku xirnaadaan Hong Kong xilli adduunka intiisa kale uu nasanayo," Ecc madaxa ayaa yiri.
Toddobaadkan, Hong Kong masuuliyiintu waxay mar kale adkeeyeen xeerarka lagu galo dalka. Gaar ahaan, suurtagalnimada in la yareeyo muddada karantiilnimada iyadoo ay jirto baaritaanka serological ee unugyada difaaca jirka ayaa la joojiyay.
Markay raacayaan duullimaadka Hong Kong, socotada waa inay soo bandhigaan shahaadada tallaalka, natiijada tijaabada xun ee COVID-19, oo aan la soo gudbin wax ka badan 72 saacadood kahor bixitaanka, iyo sidoo kale boos celin mid ka mid ah hoteellada ay dowladdu ku talisay halkaas oo tallaabooyin karantiil ah waa la oggol yahay.
Dowladda Hong Kong ayaa sidoo kale si rasmi ah ugu dartay Sputnik V-ga Ruushka liiska tallaallada coronavirus ee lagu aqoonsaday Gobolkan Maamulka Gaarka ah ee Shiinaha.
Hadda, karantiilidda khasabka ah ee dadka deggan magaalada oo lagu duray tallaalka uu Ruushku sameeyay, ayaa laga dhimi doonaa 21 maalmood illaa 14 maalmood.